बिर्खे र सुवासको फेसबुक पोष्ट ::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
बिर्खे र सुवासको फेसबुक पोष्ट
प्रकाशित मिति : शनिबार, भदौ २१, २०७१
सुवासले आज बिहान फेसबुकमा गरेको पोष्ट– Hamile bachun jail wasta garenau tata hiju tehai manche jo upexcha garthei tehai ajja badai chadai garera bhagwan banai ra chan ani yo bisap paristhitima pani film nirwan garera sambhawana khodai gareko manchelai niras banauna khogchan re dalali garirahe chan tea nepal film ko pragati chhannal…k aba ma pani morau ra aba film chalauna…hoina ma mordina ajja ramro film banauni kosis garchu…mero soch sahi chha tesile ma kei hares parna khogni nalayak tato harulai namori afule socheko jasto ramro kaam gardai janchu…plz my wellwisher haru film heti dinus ra j lagcha toe vani dinus kasto lagcha ma jasto pratikeya pani swikar garchu kina vani afno bichar rakhni sabailai adhikar chha ra maiai ramri lagnu parcha vanni gariri chaina…. jay birkhey
‘फिल्मको सिर्जना आफ्नो ठाउँमा बलियो हुनुपर्छ’, भन्ने तर्क राख्ने अभिनेता सुवास थापाको होम प्रोडक्सन फिल्म ‘बिर्खेलाई चिन्छस् !’ यतिबेला हलहरुमा उनले भनेझैं बलियो र कमजोर भनिएको सिर्जनाको लडाईंमा छ । दर्शकले राम्रो भने पनि उनको भीडन्त अहिले सुनिल थापा अभिनित हिन्दी फिल्म ‘मेरी कोम’ सँग छ । सिर्जना बलियो हुनुपर्ने मान्यताका उनी अहिले केहि छट्पटाएको उनको फेसबुक स्टाटसले प्रष्ट्याएको छ ।
भक्तपुरको टौखेलमा जन्मिएर सुर्य विनायकमा हुर्किएका थापा मेधावी विद्यार्थी थिए । कोर्सबुक त उनको प्यारो थियो नै माधव प्रसाद घिमिरे, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, पारिजात, वि.पि कोईरालाका पुस्तक पनि उत्तिकै प्यारा थिए । भक्तपुरमादेखिने जात्राले उनको दिमागमा कला र संस्कृति खिचिएको थियो । सानोमा केही बन्छु भन्ने सोच नबनाएका उनलाई सेनाको उच्च पद वा इन्जिनिएर बनाउने सोच थियो परिवारको । इन्जिनियर बन्न बाआमाले साइन्स पढ्न लगाए तर उनको मन साइन्सबाट आर्टतिर भाग्यो । स्कुल पढ्दै गर्दा साहित्य नाटकतिर फाटफुट झुल्किने उनी पछि आरम्भ नाटक समुह नै खोले भक्तपुरमा । एक वर्ष साइन्स पढेर आर.आर. क्याम्पसमा मानविकि पढ्न पुगेका उनी एक साथीको माध्यमले राष्ट्रिय नाचघरमा अभिनय सिक्न थाले ।
‘भोकको घर’ नाटकमा गरेको अभिनयले उनलाई गुरूकुलको साथ मिल्यो । एकठाउँमा बसेर काम गर्दा कला खुम्चिन्छ भन्ने बुझेर उनले गुरूकुलको डेढ वर्र्षे कोर्स सकेर केही विद्यालयमा तीन वर्ष नाटक पढाए । नाटकलाई कसरी शिक्षासँग जोड्न सकिन्छ भन्ने जस्ता आधारभुत कुरालाई उनले नाटकमा समावेश गरे । विद्यालयमै पुरै समय बसेर काम गर्दा उनले नाटकको प्याकेज नै तयार पारेका थिए । घोकन्ते विद्याको भोगाई उनले बुझेको नाटक अनि ‘पहिचान भर्सेज कन्फ्युजन’ जस्ता विविध पक्षलाई समेटेर उनले ‘फाइन्ड योर मोइस’ भन्ने कार्यक्रम नै चलाए । आफुलाई फैलाउने स्वभावका उनी भक्तपुर पुगे र नाटकघर खोले तर समय भन्दा छिटो नै काम गरेकाले काम सफल नभएको मान्छन् थापा । एकतिर बुझ्ने मान्छे कम अर्कोतिर राजधानी भन्दा अलिक टाढा उनी नाटक देखाउन विदेश गई रहनु पर्ने विविध कारणले सो थिएटर चल्न सकेन । ‘मान्छेको स्वभाव नै अरूसामु आफुलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरौं भन्ने हुन्छ,’ थापा भन्छन्–‘म पनि त्यही भएँ र आम मानिसको पहुँचका लागि फिल्ममा काम गर्न सुरू गरें ।’ कोही नाटकलाई बुद्धिजिविको लागिमात्र भनेर प्रचार गर्छन् तर नाटक र फिल्म दुबै आम मानिसले बुझ्ने हुुनुपर्ने तर्क गर्छन् उनी । चलचित्रमा प्रवेश गरेका अन्धाधुन्ध व्यक्ति, मगन्ते प्रचार शैली र अव्यवस्थित चलचित्र समिक्षाले चलचित्र क्षेत्रलाई बिगारेको उनको बुझाई छ ।
आम मानिसको कथा बोकेर उनी अहिले बिर्खे खोज्दै छन् । भदौ २० बाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र विर्खेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेर हिँडेका उनले श्रीमतिको गहना बेचेर फिल्म बनाएको बताएका छन् । फिल्मको समिक्षाका विषयमा समिक्षकले निष्पक्ष भएर समिक्षा गरेपनि उनलाई स्विकार्य छ । समिक्षकले समिक्षा गर्दा चलचित्रको वर्गीकरणलाई पनि बुझ्नु पर्ने तर्क राख्ने उनी भन्छन्–‘चलचित्र समिक्षा गर्ने समिक्षकमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ किनभने उसले कसरी समिक्षा गरिरहेको छ । यदि नराम्रो नै चलचित्र भने किन त्यसलाई मिडियामा ल्याउनु सबै चुप लागे त प्रचारै हुँदैन आफैं सुध्रन्छ नि ।’ उनी भन्छन् ।
नेपाली चलचित्र पनि नेपाली राजनीतिजस्तो भएकोमा उनलाई चिन्ता छ । उनी भन्छन्–‘फ्रान्समा हेर्ने हो भने पाँचौं शताब्दी अगाडिका तानाशाहको सालिक कस्तो मजाले राखेको छ । तर नेपालमा भने पुरानालाई फाल्दै आफु हाबी हुन खोजिरहेका छन् हो त्यही छ नेपाली कलाक्षेत्रमा । कलाकार के बोल्यो, उसको स्वभाव, चरित्र कस्तो छ भन्ने कुराको समाचार आईराख्नु जरुरी छैन ।’ यदी नराम्रो छ यो चर्चामा आउन खोजेको छ, त्यसलाई मिडियाले वास्तै नगरे यस्ता कुरा कम हुने बताउँछन् उनी ।